UBABES Wodumo ubonwe bukhoma ethatha izidakamizwa ezibizwa nge-cocaine Isithombe:INSTAGRAM
INGXOXO ekhethekile ebiphakathi komphathi wezinhlelo emicimbini, uNkululeko "Tha" Simelane nendlovukazi yomculo wegqom' uBongekile "Babes Wodumo" Simelane iphele sekumuncu, kukhala yena noTha, odume ngelikaNontandakubukwa kwiLive Instagram namhlanje.
Lolu uhlelo oluqalwe nguTha alubiza ngeSA Diamond Divas, lapho ekhuluma khona nosaziwayo besifazane abakwigqom okunguBabes, Tipcee, Busiswa noTDK Macassette.
UBabes ubekhaliswa wusizi athi ulithwele kubo. "Mina ngiqale ikhaya kabusha kubaba wami ongizalayo obengenalo ikhaya nay yoonke into. Abantu abaqondi zonke izinto obhekene nazo, mina ebengibhekene nazo futhi abantu bazokujaja. Bahlale bekujaja ukuthi udakiwe," kusho uBabes obebonakala ukuthi ubukhile.
Esevalelisa, uTha uthe kumele uBabes athandazele ukuthi uNkulunkulu angambulali ngoba angambulala nanoma yinini. Engasekho uBabes,uTha naye uvele wakhihla esikaNandi, elokhu ethi "UBabes ngeke aze ashintshe...UBabes uthathe i-cocaine (izidakamizwa) ngimbuka, abantu bembuka...ngeke aze ashintshe."
Ngaphambi kokuqala kwale ngxoxo, uBabes kuthiwa ukuvezile ukuthi ngeke akhulume ngoba udakiwe. Uphumele obala ukuthi izinkinga abhekene nazo kubo yizo esezimphendule isigqila sotshwala.
UBabes wake wayenza ingoma ethi Angisona Isidakwa Kodwa Ngihlushwa Ukoma, ayeyenze ngesigqi sasesontweni. Lo mculi waseLamontville wazakhela udumo engomeni yeBig Nuz eyayithi Tsegetsege ngaphambi kokuzakhela igazi ngeyakhe eyayithi Wololo.